Saadaasha Doorashada Maanta & Warbixin ku saabsan Afarta Musharax
Home Somali News Saadaasha Doorashada Maanta & Warbixin ku saabsan Afarta Musharax
Musharixiinta u taagan xilka Guddoomiyaha Baarlamanka
Musharixiinta u taagan qabashada Xilka Guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa ah 4 musharax oo marka laga reebo mid kamid ah intooda kale ay kazoo jeedaan Beesha Digil iyo Mirufle.
Maxamed Sheekh Cusmaan ‘Jawaari’ oo ahaa Guddoomiyihii Baarlamanka 9-aad ee Soomaaliya, ayaa markale u tartamaya xilkaan, kaasoo manta doorashadiisa ay ka dhaceyso Muqdisho.
Hadaba aqristayaasheena sharafta lahoow waxaan halkaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin kooban oo ka hadleysa afarta Musharax ee xilkan qabashadiisa u taagan.
Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari)
Waa Guddoomiyiha Baarlamankii ugu dambeeyay ee Sagaalaad, waa aqoonyahan leh Khibrad shaqo wuxuuna horay usoo qabtay xilal doowladeed oo kala duwan, wuxuu kazoo jeedaa Beesha Digil iyo Mirifle oo inta badan xilkan qabata.
Jawaari, ayaa ah shaqsiga sida weyn loogu saadaalinayo inuu ku guuleeysan doono xilkan markiisi 2-aad, waxaana taas ugu wacan in uusan tartanka ku jirin musharax u dhigmi kara isaga.
Sidoo kale Jawaari ayaa noqon doona musharaxa ugu weyn ee qabyadiisa dhameystira hadii xilkan loo doorto Maanta, wuxuuna ka faa’iideystay taageero yari ku timid Qorshihii uu shariif Xasan ku doonayay in musharax kasoo jeeda Beesha Daarood loo doorto xilkan, wuxuuna soo sharaxay Cabdirashiid Xidig.
C/rashiid Maxamed Xidig
Cabdirashii Maxamed Xidig
Waa musharax u taagan qabashada Xilka Guddoomiyaha Baarlamanka markii ugu horeysay, Khibradiisi hore waa mid aad u yar oo ku kooban Doowladihii KMG ahaa, wuxuu horay usoo qabtay xilal wasiir ku xigeeno & wasiiru Dowle.
C/rashiid Xidig, ayaa taageero ka haysta Madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan, balse saadaasha ayaa muujineysa in Xidig uusan xilka ku guuleeysan doonin waxaana uu mari doonaa jidkii uu maray Cali Khaliif Galaydh Doorashadii 2012-ka.
Cabdifataax Maxamed Geeseey
Sidoo kale waa musharax kasoo jeeda Beesha Digil iyo Mirifle, waa shaqsi ay koobantahay khibradiisa aqoon, wuxuu wasiir ka ahaa maamulka Koofur Galbeed, sidoo kale wuxuu horay usoo noqday Guddoomiyaha Gobolka Bay. Majirto rajo ku saabsan inuu xilkan ku guuleeysan karo, waxaase musharaxnimadiisa lagu sheegay mid uu ku doonayo ku xumeynta shariif Xasan oo arrimo kala dhaxeeyaan.
Idiris Cabdi Dhakhtar
Musharaxan oo isna kasoo jeeda Beesha Digil iyo Mirifle, ayaa ah aqoonyadhan dhinaca Beeraha iyo Daaqa, wuxuuna horay u noqday Guddoomiye ku xigeenka Gole la baxay Golaha Badbaadada Koofur Galbeed, wuxuu kaloo kamid ahaa Madaxweynayaashii sheegtay ineey maamulka Jubbaland Madaxweyne u yihiin.
Doorashadii kursiga Xildhibaan oo idlaatay [Yaa ku guuleystay]
Mohamed - April 15, 2018
Cabdulilaahi Faarax Wehliye, oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arimaha gudaha ayaa...
Waa shaqsi ceynkee ah Xildhibaanka kusoo baxay Doorashadii Dhuusomareeb [Warbixin]
C/raxmaan C/Shakuur oo Xayiraad saarneyd laga qaaday
DEG DEG: Doorasho maanta dhaceyso & Musharaxiinta tartamaya